Fanenjehana Manoloana ny Tribonalim-Pitantanana: Atsaharo Ny Fanarahamaso Media Sosialy Ao Ejipta · Global Voices teny Malagasy
Atsaharo Ny Fanarahamaso Media Sosialy Ao Ejipta
Nandika (en) i AFTE
Voadika ny 20 Avrily 2019 15:34 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Deutsch, عربي
(Fanamarihana: ity lahatsoratra ity dia navoaka tamin'ny teny anglisy ny Jona 2014)
Ny dika voalohany tamin'ity lahatsoratra ity dia navoaka teo amin'ny blaogy AFTE.
Tamin'ny 17 Jona 2014, vondrona marobe mpiaro zon'olombelona sy olom-pirenena voakasik'izany no nametraka fitoriana tany amin'ny Tribonalim-pitantanana tao Ejipta, nitondra ny laharana 63055/68, mba hampitsaharana ny antso tolobidy iray nataon'ny governemanta mikendry ny hividy rindrambaiko hahafahana manara-maso ireo hafatra alefan'ny daholobe sy ireo resadresaka manokana ifanaovan'ireo mpampiasa media sosialy.
Manao zinona an'ireo dingana fototry ny raharaham-pitsarana mahazatra ny fanaraha-maso ny vahoaka amin'io endriny io, sahala amin'ny fahazoana didim-pitsarana iray alohan'ny hanombohan'ny fanarahamaso ny olona iray. Ahitana fanitsakitsahana amin'ny lafiny rehetra ny zo sy ny fahalalahan'ny daholobe tsy azo amidy ary iantohan'ny lalàm-panorenena Ejipsiana io, anisan'izany ny fahalalahana maneho hevitra, ny fahalalahana hahazo vaovao, ny fiainana manokana sy ny fiarovana.
Niantso tolobidy hividianana “fomba iray handrefesana ny hevitry ny daholobe” ny Minisitry ny Atitany, ao anatin'ny sehatra “Tetikasa fanarahamaso ny loza manambana mifandraika amin'ny fiarovana an'ireo tambajotra sosialy”. Navoakan'ny AlWatan tamin'ny 1 Jona 2014 ilay antso tolobidy. Nasehon'ireo sary tsy feno avy amin'ilay antontan-kevitra navoaka teo amin'ilay tranonkalam-baovao ny pitsopitsony ara-teknika ilaina amin'ilay rafitra izay hiasa ho ampahany amin'ny tetikady ikendrena “hanarahana maso, hananganana lisitra, hanadihadiana, hanatanterahana, hanohanana, hampitahàna ary hitsipahana” “hevitra vitsivitsy manimba”, araka ny nambaran'ny Minisitera. Ao anatin'izany ireto voalaza manaraka ireto:
… fitenenan-dratsy sy tsy fitokisana ny finoana; ny fizarazaràna ara-paritra, relijiozy, ara-poko ary iara-tsaranga ny fanelezana tsaho sy finiavana hanova ny zava-misy; ny famafàzana fanendrikendrehana, fanalambaraka, fampiasana teny manesoeso, ny fampiasàna teny tsy mendrika, ny fitakiana ny fialàn'ny andrim-panjakana; ny fandrisihana fanaovana an-tendrony, ny herisetra sy ny fanoherana; fiantsoana fihetsiketsehana, ny fitorevahana sy ny fitokonana tsy ara-dalàna, ny sary vetaveta, ny gaboraraka, sy ny tsy fahampian'ny fitondrantena; fampianarana ny fomba atao na fanamboarana zava-mipoaka sy fanafihana, korontana fa tsy tetikady, fitakiana ny hanaovana ho ara-drariny ny fiarahana amin'ireo fahavalo sady mandingana ny stratejian'ny fanjakana amin'ity resaka ity; fanjonoana an'ireo fahadisoana, fihazàna hena; fakàna an'ireo fanambaràna ivelan'ny sahan-kevitra misy; ary fanelezana fitaka sy fanambaràna fahagagana.
Mihevitra ireo fikambanana tanisaina etsy ambany fa ny rafitra izay eo andalana ho azon'ny minisitera dia tsy mandrahona fotsiny ny fiainana manokan'ireo an-tapitrisany mpikira aterineto, amin'ny alalan'ny fanandramana manara-maso an'ireo serasera manokana sy an'ny tsirairay, tahaka ireo izay mitranga ao amin'ny Viber sy Whatsapp. Manitsakitsaka ihany koa ireo fahalalahan'ny daholobe koa ilay rafitra amin'ny fikarohana sy fanasokajiana tsy mitsahatra ny fifampidimpidirana ara-tsosialy any anatin'ireo tambajotra sosialy, ampahany iray tena manan-danja eo amin'ny tontolom-bahoaka amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fiarahamonina malalaka sy demokratika.
Ny fisiana karazana rafitra tsotra toa itony dia fanitsakitsahana ny fanajana ny ara-dalàna araka izy iantohan'ny fehezandalàna mifehy ny heloka bevava sy ny fenitra iraisam-pirenena. Ahafahan'ny fahefana mpanatanteraka ao amin'ny governemanta mampihatra ireo fahefana voatokana ho an'ny mpanao lalàna sy fitsaràna izy io. Mbola zava-manan-danja lehibe hatrany, ny fisian'ny fampihenana an'ireo zo sy fahalalahana ho an'ireo olona antapitrisany amin'ny fomba tsy misy ilàna azy sy tsy mifandanja raha oharina amin'ireo tanjona ara-pitsaràna, izay heverina fa tokony ho ananan'io rafitra io.
Mba hisian'ny fiainana ara-politika malalaka sy milamina, ilaina ny fiainana manokana ao anatin'ny tontolo natao ho an'ny daholobe. Mariky ny tsy refesimandidy tanteraka ny fanaovana hetraketraka amin'izy io. Tokony hanaiky ny lalàna aloha ny minisitry ny atitany, izay andraikiny ny mampihatra azy, fa tsy hanitsakitsaka izany noho ireo antony marobe, tahaka ny fangatahana ny fialàn'ireo andry ara-tsosialy na ny “fanesoana”, na ny fanjonoana an'ireo hadisoana tsy nahy sy ‘fanelezana fitapitaka’, izay tsy ao anatin'ny andraikitry ny polisy…
Mangataka an'ireo tomponandraikitra ejipsiana ireo fikambanana manao rangopohy etsy ambany mba hanaja ny fanekena iraisam-pirenena nataon'izy ireo, anisan'izany ny eo amin'ny sehatry ny fanajana ny fiainana manokana, ny fahalalahana mahazo vaovao sy ny fanehoana hevitra, mifanaraka amin'ireo Andininy faha 17, 18 ary 19 ao anatin'ny Fifanarahana Iraisampirena mifandraika amin'ireo zo sivika sy politika, ary hampitsahatra tsy misy hatak'andro io tetikasa io.
Antsoin'ireo fikambanana manao rangopohy eo ambany ireo olona rehetra izay mahatsapa fa voahitsakitsaka ny zony amin'ny fanarahamaso an'ireo media sosialy, mba hanatrika ny fotoam-pitsaràna voalohany ataon'ny Tribonalim-pitantanana ary hanatevina ilay fitoriana napetraka any amin'ny fitsaràna mba hiarovana ny zo fototr”izy ireo eo amin'ny sehatry ny fiainana manokana sy ny fahalalahana maneho hevitra.
* Association of Freedom of Thought and Expression (AFTE) – Fikambanana ho an'ny Fahalalahana Misaina sy Maneho Hevitra
* Arab Digital Expression Foundation (ADEF) – Orina Arabo ho an'ny Fanehoankevitra Nomerika
* Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) – Hetsika Ejiptiana ho an'ny Zon'ny Tsirairay
* Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) – Ivontoerana Fandalinana ny Zon'Olombelona, Kairo
* Hisham Mubarak Law Center (HMLC) – Hisham Mubarak, Ivontoerana Fianarana Lalàna
* Arabic Network for Human Rights Information – Tambajotra Arabo ho Fampahafantarana momba ny Zon'Olombelona
* Egyptian Foundation for the Advancement of Children Conditions – Orina Ejipsiana ho an'ny Fampivoarana ny Toepiainan'ny Ankizy
* Centre for Egyptian Women Legal Assistance – Ivontoerana ho Fanohanana ara-Pitsarana ny Vehivavy Ejipsiana
* New Woman Foundation – Orina Vehivavy Vaovao
* El Nadeem Center for Rehabilitation of Victims of Violence – El Nadeem, Ivontoerana ho Fanarenana ireo Niharan'ny Herisetra
Fandrakofana bebe kokoa: Social Networks Security Hazard Monitoring Project Booklet